Bit By Bit - Unxulumano - 6.4.1 Ukuhlonelwa Abantu
Intlonipho Abantu malunga nokunyanga abantu bazimele imbeko iminqweno yabo.
INgxelo Belmont uxoxa ukuba siseko yentlonipho Abantu iqulathe ezibini ezicacileyo: (1) abantu kufanele baphathwe elizimeleyo kunye (2) abantu ukuzimela olutshitshileyo kufuneka nelungelo Ukhuselo olongezelelweyo. Mafa kalukhuni singqinelane ngokungabandululi abantu ukulawula ubomi babo. Ngamanye amazwi, Ukuhlonela Abantu icebisa ukuba abaphandi akufuneki benze iimpahla abantu ngaphandle kwemvume yabo. Okubalulekileyo, le mbelele na ukuba umphandi ucinga ukuba le nto yenzekayo akuyongozi okanye luncedo. Intlonipho Abantu kukhokelela kuluvo lokuba abathathi-kungekhona abaphandi-ukuya isigqibo.
Ukuziqhelisa, umgaqo Ukuhlonela Abantu sele wabatyhilelayo kuthetha ukuba abaphandi ukuba, ukuba kunokwenzeka, bafumana imvume esekelwe elwazini kuzo nxaxheba. Ingcinga engundoqo kunye nesigulana kukuba nxaxheba kufuneka inkcazelo efanelekileyo ngendlela neqondakalayo ke makavumelane ngokuzithandela ukuba bathathe inxaxheba. Nganye kwezi semigaqo ngokwaso sasingumba ingxoxo eyongezelelweyo eninzi nemfundo (Manson and O'Neill 2007) , yaye ndiza kunikela lonke icandelo kamva kwesi sahluko ukuze imvume kulwazi.
Ukusebenzisa umgaqo Ukuhlonela Abantu kule mizekelo ezintathu ukususela ekuqaleni kwimimandla Iimbalasane isahluko exhalabisayo kunye ngamnye kubo. Kwimeko nganye, abaphandi benza izinto abathathi-kusetyenziswa iinkcukacha zabo (Ngcamlani, sies, okanye Time), kusetyenziswa ikhompyutha zabo zokwenza umsebenzi womlinganiselo (elithile), okanye ababhalise kuzo ulingelo (njengesifo Emotional) mthetho ngaphandle kwemvume okanye ulwazi . Yokutyeshela ngomgaqo yentlonipho Abantu akuthethi ngokuzenzekelayo ukwenza ezi zifundo ngokweenkqubo nemikhwa akuvumelekanga; Intlonipho Abantu yenye ngemigaqo ezine. Kodwa, ucinga Ukuhlonela Abantu lukwacebisa ezinye iindlela zifundo kuphuculwa nemikhwa leyo esemthethweni. Umzekelo, abaphandi ukuba ekuzukisekeni ezinye uhlobo kokuvuma nxaxheba phambi kokuqalisa kwesi sifundo okanye emva kokuba luphelile; Ndiza kubuyela ezi iinketho xa kuxoxwa lwemvumelwano eyazisiweyo ngakumbi ngezantsi. Okokugqibela, iingcaphephe uphando ukugxininisa ukuba iinkxalabo malunga waphule ukuzimela abantu kuvela nkqu kwimeko izifundo ezingenabungozi ngokupheleleyo. Iinkxalabo malunga ingozi kunye neengozi ngokwendalo ukungena ingqalelo yokuziphatha, kodwa ngokuqhelekileyo kuqwalaselwa phantsi Umgaqo Beneficence, umgaqo wokuba ndiya kuqwalasela elilandelayo.